Ferdinand oo magacaabay SHANTA daafac ee ugu fiican taariikhda Premier League… (Miyuu ku jiraa Van Dijk?) – Gool FM
Dajiye August 3, 2020
(England) 03 Agoosto 2020. Halyeeyga kooxda Manchester United ee Rio Ferdinand ayaa ku qiimeeyay daafaca reer Holland iyo naadiga Liverpool ee Virgil van Dijk inuu ka mid yahay shanta daafac ee ugu fiican taariikhda horyaalka Premier League.
Rio Ferdinand ayaa waryeysi uu ku bixiyay wargeyska “Mirror” ee dalka England wuxuu ku sheegay:
“Waan jeclahay Virgil van Dijk, waxaan u maleynayaa inuu yahay kan ugu fiican adduunka ee booskiisa xilligan”.
“Shaki kuma jiro inuu yahay ciyaaryahan weyn, laakiin waxaan u maleynayaa inuusan la dagaalamaynin daafacyada kale waa weyn ee jiilkiisa ah”.
“Haddii aan ka hadlayno daafaca ugu fiican adduunka, waxaan magacaabi karaa 5 illaa 9 xiddig oo aniga jiilkeyga ah, mana u maleynayo in iyaga oo kale aan ka magacaabi karo kuwa xilligan jira”.
“Tani kama dhigna inaan xoogaa hoos u dhigayo, daafacyada hadda jira, balse waxaan ka hadleynaa, kuwo badan oo kartidooda lagu yaqiinay waqti kasta”.
“Waxaan magacaabi karaa 5-ta daafac ee ugu fiican taariikhda horyaalka Premier League, kuwaasoo kala ah Nemanja Vidić, Vincent Kompany, John Terry, Virgil van Dijk iyo Sol Campbell” ayuu yiri halyeyga Rio Ferdinand.